Ku soo dhowow eWIC!
Iyadoo la adeegsanayo eWIC, faa'iidooyinkaaga WIC ee qoyskaaga ayaa lagu ridi doonaa kaarkaaga eWIC xafiiskaaga WIC.
Liiska cuntooyinkaaga ayaa lagu siin doonaa adiga oo leh bilowga iyo dhammaadka muddada faa'iidadaada.
Waxaad u adeegsan doontaa Kaarkaaga ME eWIC inaad ku iibsato cuntadaada WIC-ga la oggol yahay dukaamada la oggolaaday ee ME WIC
Kahor intaadan adeegsan Kaarkaaga Maine eWIC,
waa inaad doorataa 4-lambar shaqsiyeed
Lambarka Aqoonsiga (PIN).
Fadlan raac tilmaamahan:
Wac lambarka taleefanka ee dhabarka kaarkaaga eWIC
Gali lambarka kaarkaaga hadda ee ku yaal dhinaca hore ee kaarkaaga
Ku qor taariikhda dhalashadaada bil bil lambar ah, 2 lambar maalin ah, iyo sanad 2 lambar ah
Gali nambarka dirista boostada ee hadda
Ku qor lambar 4 lambar PIN oo shaqsiyeed oo aad xusuusan karto
Dib-u-gal lambarkaaga lambar 4 lambar ee shakhsi ahaaneed si aad u xaqiijiso
Wac Adeegga Macaamiisha eWIC si aad u hubiso dheelitirka dheeftaada, taariikhda iibsiga, iyo macluumaadka koontada: 1-855-250-8945
Daryeelka Kaarka eWIC
Ku hayso kaarkaaga eWIC meel aamin ah, sida boorsadaada ama boorsadaada.
Kaarkaaga eWIC ka dhig mid nadiif ah, kana bax qoraxda tooska ah, kana fogow birlabta iyo korantada.
Ha la wadaagin nambarkaaga cidna.
Haddii qof helo kaarkaaga eWIC oo uu garanayo lambarkaaga PIN, waxay isticmaali karaan dheefahaaga. Faa'iidooyinkaas lama beddelayo.
Beddelka PIN / eWIC Card
Haddii aad ilowdo lambarkaaga PIN, ka wac Adeegga Macaamiisha eWIC 1-855-250-8945 in la beddelo.
Haddii kaarkaaga eWIC lumo, la xado ama waxyeelo soo gaarto, wac Adeegga Macaamiisha eWIC 1-855-250-8945.
Beddelka kaarka eWIC, booqo wicitaankaaga xarunta 'WIC clinic' 1-800-437-9300 in eWICcard-kaaga la beddelo.
Maxaa dhacaya haddii aan illoobay nambarkayga PIN ama aan khalad u galo?
Haddii aad geliso PIN-kaaga khalad afar jeer oo isku xigta, kaarkaaga eWIC waa la xirayaa illaa saqda dhexe. Waad beddeli kartaa lambarkaaga PIN adoo wacaya Adeegga Macaamiisha eWIC Haddii aadan dib u dhigin lambarkaaga PIN, kaarkaaga eWIC si otomaatig ah ayaa loo furayaa saqda dhexe, hase yeeshee, waxaad weli u baahan doontaa inaad ogaato PIN-kaaga si aad u isticmaasho kaarkaaga eWIC.
Sida Loo Dukaameysto Cunnooyinka WIC
Ogow dheelitirkaaga dheefta cuntada ee WIC markaad tagto dukaanka.
Xullo cuntooyinkaaga WIC adoo adeegsanaya dheelitirka dheefta gurigaaga iyo liiska cuntada la ansaxiyey ee ME WIC.
Haddii aad leedahay wax kabadan 50 UPC shaqsiyadeed oo kujira amarkaaga WIC waxaad ubaahantahay inaad kalasaaro waxyaabaha WIC iyo iibsashada kale.
Had iyo jeer u isticmaal kaarka eWIC noocaaga ugu horreeya ee lacag bixinta.
Ku dhaji kaarkaaga eWIC markii lagaa codsaday PIN pad ka dibna geli lambarkaaga afarta lambar ah.
Dib u eeg rasiidka madax furashada macaamilka ee qasnajiyuhu ku siiyo. Hubso in cuntooyinka WIC ee aad moodeysay in lagu bixiyo eWIC ay ku qoran yihiin rasiidkan furashada
Taabo "Haa" si aad u aqbasho macaamilka, ama "Maya" haddii cuntooyinka aad moodeysay in lagu bixinayo eWIC aysan ku qorneyn. Waxyaabaha aan lagu bixin karin eWIC ayaa laga yaabaa in laga saaro amarkaaga, ama waxaad ku bixin kartaa iyaga nooc kale oo qandaraas ah (tusaale, dheefaha SNAP, deynta, amaahda, ama lacagta).
Qaado kaarkaaga iyo risiidhka.
Hayso risiidhkaaga ugu dambeeya - wuxuu muujinayaa dheefahaaga cuntada ee kuu haray bisha, waana lagama maarmaan in la siiyo xafiiskaaga WIC haddii arrimuhu soo baxaan
Baadh alaabta ku jirta barnaamijka WICShopper si loo hubiyo inay u qalmaan WIC. Xusuusnow inaad xaqiijiso inaad ku haysato waxtarrada WIC (cuntooyinka & caanobooraha) kaarkaaga eWIC ka hor intaadan isku dayin iibsi!
Ka eeg Maine WIC Liiska Cunnada la Ansixiyay (AFL) ee WICShopper (ama noocaaga daabacan) si aad u aragto faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & caanaha) aad iibsan karto.